Tanora · Janoary, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Janoary, 2009
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Janoary, 2009
Sina: Mbola mba misaintsaina ireo ‘zazakely tratry ny vato any anatin'ny voa’ ve ny governemanta?
Shina30 Janoary 2009
Voafafa tsikelikely niaraka tamin'ny fikatonam-baravaran'ny orinasa Sanlu ny fampitam-baovao momba ny trangan'ny ronono voapozina tany Sina. Tamin'ny Desambra 2008, nanambara ny tetika iaingàna ho fanonerana izany ny governemanta Sinoa, na izany aza anefa, fahadisoam-panantenana ho an'ny maro tamin'ireo tra-doza no nisy. Ary araka ny tatitry ny gazety mpiseho ao Hong...
Fanabeazana27 Janoary 2009
Green Boy sarin'i Patrick Lahatsary roa roa avy aty Madagasikara no maneho antsika ny fikaratahan'ny ankizy mikarokaroka sy mamoron-javatra ary fahasahiana kely mba hihoirany eo amin'ny fiainana. Voalohany amin'izany i Toky izay mampiasa kapoaka sy fitaovana hafa efa nampiasaina hanaovana fiara kapoaka, ny iray hafa indray mampiseho an'i Green Boy,...
Brunei: fampisehoana fahitalavitra mivantana “Passport to Fame”
Media sy Fanoratan-gazety17 Janoary 2009
Manana ny fankafizany manokana ny télé réalité toy ny firenen-kafa i Brunei amin'ny fisafidianany izay mpihira tiany indrindra. Nahatratra ny faratampony ny andiany faharoa tamin’ny fifaninana ny P2F(Passport To Fame) tamin’ny nioahan'i Dayat ho mpandresy tamin’izany. RanoAdidas dia nitatitra ny fizotran’ny lanonana ka nivoahan'i Dayat ho mpandresy ao amin'ity blaogy...
Nitsidika ireo Palestiniana voahilikilika ny mpitoraka blaogy Ejyptiana
Ejipta16 Janoary 2009
Vondron'olona maratra Palestiniana maro no nitsofoka any Ejypta avy ao amin'ny sisintany ao Rafah ary ry Ahmed Al Sabbagh sy Mohamed Hamdy izay mpitoraka blaogy dia nanao fitsidihana ho fankaherezana azy ireny tao amin'ny tobim-pitsaboan'ny Croissant Rouge. Nanoratra i Al Sabbagh taorian'izany fa : بكاء .. وألم .. وعجز .....
Malezia: Dera ho an'ilay lehilahy misarontava
Malezia05 Janoary 2009
Matin'ny fijanonan'ny fo iray volana lasa izay ny mpanao gazety sady mpikatroka Syukree Hussain avy ao Malezia. 28 taona izy izao lasa izao. Niatrika mandrakariva ny fihetsiketsehana aseho amin'ny alalan'ny famelomana labozia fanao isan-kerinandro any Malezia i Syukree. Mahafantatra azy avokoa ny rehetra noho ny fanaovany sarontava. Nanaitra ny namany...